Hamro Kantipur | आजको राशिफल: कस्तो रहनेछ तपाईंको भाग्य? आजको राशिफल: कस्तो रहनेछ तपाईंको भाग्य?
आजको राशिफल: कस्तो रहनेछ तपाईंको भाग्य?
काठमाडौं, आज कात्तिक २६ गते शुक्रबारको राशिफल ।
कार्तिक शुक्लपक्षको अष्टमी तिथि ।
आत्मकेन्द्रीत चिन्तन अर्थात अलि स्वार्थि खालको विचारले प्राथमिकता पाउने छ, अरुले पनि यस्तै अनुभुत गर्ने छन् । पेशागत जीवन सन्तुलित बन्ने प्रयासमा रहने छ । आर्थिक क्षेत्रमा लाभ मिल्ने छ तर मनमा यसबारे सन्तुष्टि भने प्राप्त हुने छैन् ।
व्यक्तित्वमा निरन्तर गिरावट आउँदा लद्युताभाषको शिकार हुने समय सक्रिय छ । बोलीको पनि प्रभावकारीता कमि हुने हुँदा कामहरु बिग्रन जाने र झैझगडामा फस्ने अवस्था आउने छ ।
असाध्यै गम्भीरखालको व्यक्तित्व बन्ने छ । हास्य चेतको कमिले गर्दा अरुले कडा खालको मानिसका रुपमा अनुभुत गर्ने छन् । मनोबल भने उच्च रहने छ । नेतृत्व क्षमता बलियो भए पनि लचकताको अभाव देखिने छ ।
रोमाण्टिक शैलीमा तिब्रता आउने छ । साथिभाइ तथा परिवारको साथमा रमाइलो गर्ने वातावरण बन्ने छ । प्रतिष्पर्धी स्वाभाव कायम रहने छ । आफ्नै असावधानीका कारण पेशागत जीवनमा चुनौतिहरु आउने भएकाले सतर्क रहनु नै ठिक हुने छ ।
असाध्यै कडा खालको व्यक्तित्व बन्ने छ । जसका कारण आफ्नै आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरु पनि टाढा टाढा हुन खोज्ने छन् । चिन्ता र भयले सताउने छ । पेशा तथा ब्यापार ब्यवसायमा आशा गरे जस्तो उन्नति नभए पनि धेरै कठिनाई पनि हुने छैन् ।
प्रेममा धोका हुने छ । विश्वास माथि कुठराघात हुने छ । भाग्यको साथ नभएकाले मन पनि निरश खालको हुने छ । मेहनत धेरै गर्नु पर्ने तर प्रतिफल भने न्युन हुन जाँदा निराशाका लहरहरु निरन्तर आउने छन् ।
विचार गरेर मात्र बोल्ने तथा निर्णय लिने बारेमा गम्भीर बन्नु उपयुक्त हुने छ । गलत कार्यमा गलत निर्णय गर्ने जोखिम देखिएको छ । मनमा अत्यन्त निराशाले सताउने छ । पेशागत जीवनप्रति पनि उत्साहको कमि हुने छ ।
समयमा केही सुधार आउने छ । परिवारको साथका कारण प्रष्तिठा आर्जन हुने छ । बिगतमा गरिएको निर्णयका कारण हाल कठिनाईको सामना गर्नु पर्ने छ । मनमा उदासिनताको क्रम रही रहने छ । दाम्पत्य जीवनमा भरपुर सहयोग र भर हुने छ ।
धन धान्यमा बृद्धि हुने छ । उत्साह र नयाँ जाँगर प्राप्त हुने छ । नयाँ बाहनको मज्जा लिन पाइने तथा यात्रामा मन जाने छ । मेहनति र पराक्रमी स्वाभाव हुने छ । पेशागत जीवनमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमा पाइला चाल्न दृढता आउने छ ।
परिवारका सदस्यहरुले भरोसा गर्ने छन् । पेशागत जीवन सकारात्मकता तर्फ जाने छ । आम्दानीमा धेरै बृद्धि नभए पनि सकारात्मक लक्षणहरु देखा पर्ने छन् । प्राकृतिक सोचहरु मनमा आउने छन् ।
सम्भावनाका नयाँ नयाँ बाटाहरु देखा पर्ने छन् । नयाँ नयाँ काम गर्नका लागि विचारहरु आउने छन् । पेशात जीवन औसत रुपमा अघि बढ्ने छ । परिवारमा भने किचलो देखिने छ । आर्थिक रुपमा समय अनुकुल रहने देखिन्छ ।
धार्मिक–आध्यात्मिक सोचहरु तिब्र बन्ने छ । करुण भाव तथा दया मायाको भावमा बृद्धि हुने छ । नरम खालको भावनात्मक स्वाभाव हुन जाने छ । पेशागत जीवनमा नयाँ प्राप्ति नभए पनि निरन्तरता कायम रहने छ ।